တိုက်လေယာဉ် ၂၀ နဲ့ ကန်-တောင်ကိုရီးယား လေကြောင်းအင်အားပြ
တောင်ကိုရီးယားနဲ့အမေရိကန်လေတပ်တိ့ အင်္ဂါနေ့ ပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှု။ (ဇွန် ၇၊ ၂၀၂၂)
မြောက်ကိုရီးယားက မကြာမီ နျူကလီယား လက်နက်တရပ်ကို စမ်းသပ်တော့မယ့် လက္ခဏာပြနေချိန်မှာ အမေရိကန်နဲ့ တောင်ကိုရီးယားတို့က တိုက်လေယာဉ် ၂၀ နဲ့ လေကြောင်းအင်အားတရပ်ကို ပြသလိုက်ကြပါတယ်။ မြောက်ကိုရီးယား က တမင်တကာ စလာတာမှန်သမျှကို တုံ့ပြန်မယ့်အကြောင်း ဆိုးလ်မြို့ကို ရောက်ရှိနေတဲ့ အမေရိကန် ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မစ္စ Wendy Sherman က ပြောပါတယ်။
“မြောက်ကိုရီးယားအပေါ် အမေရိကန်က ရန်လိုစိတ်မရှိပါဘူး။ မတည်မငြိမ်ဖြစ်အောင်၊ တမင်တကာ စနေတာကိုရပ်ပြီး သံတမန်ရေးလမ်းကြောင်းကို ရွေးချယ်ဖို့ ကျမတို့ ဆက်လက် တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်မှာ လုံးဝဥဿုံ နျူကလီယားလက်နက်ကင်းစင်ရေး ရည်မှန်းချက်ကို အမေရိကန်နဲ့ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့က ဆက်လက်ထားရှိထားပါတယ်။” လို့ မစ္စ Sherman က ပြောသွားတာပါ။
လေကြောင်းအင်အားပြသရာမှာ တောင်ကိုရီးယား တိုက်လေယာဉ် ၁၆ စင်း နဲ့ အမေရိကန် တိုက်လေယာဉ် ၄ စင်းတို့ ပါခဲ့ကြပါတယ်။
ခုနစ်ကြိမ်မြောက် နျူကလီယားလက်နက်စမ်းသပ်မယ့် အရိပ်လက္ခဏာတွေကိုလည်း တွေ့နေရပါတယ်။ အရှေ့မြောက်ပိုင်း Punggye-ri. မြို့အနီးက မြေအောက်စမ်းသပ်မှုနေရာကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းတကြောင်းကို ပြန်ဖွင့်လိုက်တဲ့လက္ခဏာ တွေ့ရတယ်လို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အနုမြူစွမ်းအင် အေဂျင်စီရဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Rafael Mariano Grossi က တနင်္လာနေ့ မှာ ပြောပါတယ်။
တိုကျလယောဉျ ၂၀ နဲ့ ကနျ-တောငျကိုရီးယား လကွေောငျးအငျအားပွ
မွောကျကိုရီးယားက မကွာမီ နြူကလီယား လကျနကျတရပျကို စမျးသပျတော့မယျ့ လက်ခဏာပွနခြေိနျမှာ အမရေိကနျနဲ့ တောငျကိုရီးယားတို့က တိုကျလယောဉျ ၂၀ နဲ့ လကွေောငျးအငျအားတရပျကို ပွသလိုကျကွပါတယျ။ မွောကျကိုရီးယား က တမငျတကာ စလာတာမှနျသမြှကို တုံ့ပွနျမယျ့အကွောငျး ဆိုးလျမွို့ကို ရောကျရှိနတေဲ့ အမရေိကနျ ဒုတိယနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး မစ်စ Wendy Sherman က ပွောပါတယျ။
“မွောကျကိုရီးယားအပျေါ အမရေိကနျက ရနျလိုစိတျမရှိပါဘူး။ မတညျမငွိမျဖွဈအောငျ၊ တမငျတကာ စနတောကိုရပျပွီး သံတမနျရေးလမျးကွောငျးကို ရှေးခယျြဖို့ ကမြတို့ ဆကျလကျ တိုကျတှနျးလိုပါတယျ။ ကိုရီးယားကြှနျးဆှယျမှာ လုံးဝဥဿုံ နြူကလီယားလကျနကျကငျးစငျရေး ရညျမှနျးခကျြကို အမရေိကနျနဲ့ တောငျကိုရီးယားနိုငျငံတို့က ဆကျလကျထားရှိထားပါတယျ။” လို့ မစ်စ Sherman က ပွောသှားတာပါ။
လကွေောငျးအငျအားပွသရာမှာ တောငျကိုရီးယား တိုကျလယောဉျ ၁၆ စငျး နဲ့ အမရေိကနျ တိုကျလယောဉျ ၄ စငျးတို့ ပါခဲ့ကွပါတယျ။
ခုနဈကွိမျမွောကျ နြူကလီယားလကျနကျစမျးသပျမယျ့ အရိပျလက်ခဏာတှကေိုလညျး တှနေ့ရေပါတယျ။ အရှမွေ့ောကျပိုငျး Punggye-ri. မွို့အနီးက မွအေောကျစမျးသပျမှုနရောကိုသှားတဲ့လမျးကွောငျးတကွောငျးကို ပွနျဖှငျ့လိုကျတဲ့လက်ခဏာ တှရေ့တယျလို့ အပွညျပွညျဆိုငျရာ အနုမွူစှမျးအငျ အဂေငျြစီရဲ့ ညှနျကွားရေးမှူးခြုပျ Rafael Mariano Grossi က တနင်ျလာနေ့ မှာ ပွောပါတယျ။